Akwụkwọ Sheryl Jones na Martech Zone
Edemede site na Sheryl Jones
Sheryl bụ Sr. Ọkachamara Ọkachamara na Uplers bụ onye nwere nnukwu ahụmịhe n'ịmepụta ndị ọrụ akọwapụtara nke ọma gafere mpaghara ahịa dijitalụ. Ọ na-enyere ndị ahịa azụmaahịa dijitalụ aka iji nyere ndị azụmaahịa aka ị nweta ROI dị mkpa.
Monday, October 26, 2020 Monday, October 26, 2020 Sheryl Jones
Woocommerce bụ ihe kachasị ewu ewu na ịgbagha otu n'ime plugins eCommerce kacha mma maka WordPress. Ọ bụ ngwa mgbakwunye free nke dị mfe ma kwụ ọtọ iji melite ma jiri. Obi abụọ adịghị ya bụ ụzọ kachasị mma iji mee ka ebe nrụọrụ weebụ WordPress gị banye na ụlọ ahịa e-commerce zuru oke! Agbanyeghị, iji nweta ma jigide ndị ahịa, ịchọrọ karịa ụlọ ahịa eCommerce siri ike. Kwesịrị iji usoro ịre ahịa email siri ike n'otu ebe iji jigide ndị ahịa wee gbanwee ha